Fanondranana jirofo : betsaka ny vokatra tsy manaraka kalitao avy eto an-toerana (NewsMada) | AEMW
Fanondranana jirofo : betsaka ny vokatra tsy manaraka kalitao avy eto an-toerana (NewsMada)
Faharoa maneran-tany i Madagasikara amin’ny fanondranana vokatra jirofo. Hita anefa tato ho ato fa miharatsy ny kalitao, takina eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Koa ny 19 aogositra lasa teo, tany Farafangana, nanaovana atrikasa ny fanatsarana izany vokatra jirofo izany ho an’ireo faritra rehetra mpamokatra azy.
Faritra Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, samy mpamokatra jirofo daholo fa voalohany ny any Analanjirofo, araka izay anarany izay. 15.000 t isan-taona ny aondrana any ivelany amin’io vokatra io avy eto Madagasikara ; niakatra 16.500 t izany tamin’ity taona ity. Faharoa maneran-tany i Madagasikara, voalohany i Indonezia. 40 % ny vokatra avy eto an-toerana mbola aondrana any Indonezia. Na izany aza, betsaka ny olana, tsy mahafeno ny fepetra iraisam-pirenena ny kalitaon’ireo vokatra, indrindra ny avy any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana.
Koa nomena fiofanana manokana ireo tantsaha mpamboly sy ny mpandraharaha. Raha ny voalazan’ny Vondron’ny mpanondrana jirofo, ireo mpandraharaha mihitsy no tsy manaraka fepetra takina momba ny kalitao eo amin’ny varotra iraisam-pirenena. Tanjona tamin’io atrikasa io ny hisian’ny mpamboly sy mpandraharaha tena matihanina, ny hampifandray azy ireo. Mampidi-bola vahiny eto amin’ny firenena ny varotra jirofo mankany ivelany. Koa tsy azo atao intsony ny manondrana vokatra tsy manara-penitra, mampifangaro azy, araka ny fanaon’ireo mpandraharaha sasany.
Fanavaozana ny voly
Faritra Analanjirofo mpamokatra azy be indrindra fa ny olana hafa, ny fitangosana ny raviny hanaovana “essence de girofle”. Tsy voatana amin’izany anefa ireo mpamboly, koa namoahan’ny faritra didy ihany ny fahazoana manao izany, roa na telo volana. Maro ihany koa ny fototra efa antitra, saika hita manerana ny distrika enina any an-toerana. Toy izany koa ny fahanteran’ny fototra maro any amin’ireo faritra hafa. Fepetra noraisin’ny faritra Analanjirofo izao ny fanavaozana ny voly, 150.000 fototra isan-taona ny enjehina.
← Analamanga : nampitaovana ny kaominina 31 ny faritra (NewsMada)
Fakafaka : mila mahay mivarotra (NewsMada) →